पनि निरपेक्ष निश्चितताका साथ एक अनुभवी वैज्ञानिक zoologist धेरै कसरी प्रजाति ठ्याक्कै अहिले यो ग्रह मा अघि अस्तित्व मौजूद भन्न सक्दैन। निरन्तर नयाँ प्रजातिहरू खोल्न र धरती को एक अनुहार, दुर्भाग्यवश, पुरानो प्रकार गायब। सायद त्यो किन यति जनावर को प्रजनन र विकास बारे थप प्रजाति को विलुप्त को कगार मा थियो comprehensively अध्ययन गर्न प्रयास गर्न, artificially लापता रोक्न प्रयास गर्न, जान्न महत्वपूर्ण छ।
को वर्गीकरण मा एक बिट
पशु राज्य प्रकार र वर्गहरू, कीडे, molluscs, क्रसटेशियन र echinoderms, arachnids र कीराहरू सहित धेरै छ। एक vertebrate सब: माछा, amphibians, सरीसृप, चरा, पशु। जनावरहरूको एक किसिम ग्रह मा बस्ने, राम्रो viewports सेट प्रतिनिधित्व छन्। तर यति आफ्नो संरचना विभिन्न, पशु एक राज्यमा, संयुक्त धेरै पक्षहरूमा भिन्न। जनावर कसरी पाल्नु गर्न? प्रक्रिया विभिन्न समूह विभिन्न तरिकामा बाहिर छ। का आधारभूत प्रकार हेरौं।
केही कम जनावर (जीवको) को लागि, द्वारा विशेषता , अलैंगिक प्रजनन सन्तानका सिर्जना र वृद्धि गर्न सरल तरिका रूपमा। पशु पुनःउत्पादन र यस प्रकारको विकास प्रत्यक्ष fission वा नवोदित द्वारा बाहिर छ। यस्ता जनावरहरू कीडे, स्पंज, jellyfish, Amphioxus र धेरै अन्य समावेश गर्नुहोस्। वास्तवमा, तिनीहरूले यति सानो हो। तर विकास प्रक्रिया को प्रकृति थप समय-खपत र प्रजनन को जटिल प्रक्रिया अन्य सिर्जना गर्न।
एक पुरुष र एक महिला: यस प्रकारको सन्तान सिर्जना गर्न दुई फर्श आवश्यक छ। प्रजनन र जनावरहरूको विकास spawning वा अन्डा calving (मुख्यतया स्तनधारी) द्वारा गरिन्छ। उदाहरणका लागि, अन्डा र कीराहरू, र arachnids, साथै सांप र चरा राख्नु। Spawn: amphibians र माछा। तर माछा को केही प्रकार - viviparous (जस्तै, guppies)। शावक जन्म दिन र ती सबै स्तनधारी (मानिस सहित) को दूध खुवाइन्छ। केही प्रजाति मा, प्रजनन पुरुषहरु को सहभागिता बिना ठाउँ लिन्छ। यो घटना parthenogenesis भनिन्छ। उदाहरणका लागि छेपारो र मौरीले, सामान्य।
यो पनि विभिन्न तरिकामा हुन्छ। त्यसैले कीराहरू मा, उदाहरणका लागि, त्यहाँ धेरै तीन रूपमा चरणमा छन्: अन्डा, जीव, pupa, वयस्क व्यक्ति, आफ्नो अन्डा सक्षम। र यो प्रजाति को जनावर केही माछा प्रजनन र विकास कहाँ यो सन्तान सम्म अन्डा भालु महिला, मुख मा हुन्छ। पहिले नै वयस्क भ्यागुतो गठन जो को tadpole - को अन्डा देखि Amphibians एक मध्यवर्ती फारम विकास। कछुवा र सांप progeny चरा जस्तै, अन्डा सिधै उत्पन्न। सबै स्तनधारी प्रजाति viviparous, पुरातन माछा रूपमा सब जो पनि डल्फिन, छन्। तिनीहरूले वर्ग को यसैले नाम दूध संग सन्तान दूध पिलाना। जनावरहरूको विभिन्न प्रजातिका progeny को परिपक्वता केही मिनेट देखि वर्ष दसौं गर्न, विभिन्न अवधि मा स्थान लिन्छ। एक-दिन पुतलीहरु र अन्य कीराहरू - सबैभन्दा "छिटो"। धेरै बिस्तारै maturing जवान पुस्ता - अत्यधिक स्तनधारी को वर्ग मा।
जीवनको संगठनको जनसंख्या-प्रजाति स्तर। विवरण र उदाहरण
शब्द "लापरवाह": मूल्य phraseologism
कर्क संग कोरिज। खाना पकाउने विधि।
म मेरो आमा गर्भवती भएको सपना देख्यो: सपना पुस्तक। आमा गरेको गर्भावस्था बारेमा सपना को व्याख्या
Juicers रेटिंग: अवलोकन, विशेषताहरु, मूल्य
किन कुखुरा रगत प्रत्येक अन्य चुम्बन?
के तरङलम्बाइ गर्छ
यूजीन को रहस्य को नाम के हो?
अद्वितीय वनस्पति उद्यान। समारा